FANARAHAN-DIA TANY AMORON’I MANIA : Dahalo miisa 4 lavon’ny balan’ny zandary, basy miisa 6 sarona
Dahalo miisa 4 indray no lavon’ny balan’ny zandary taoa Amoron’i Mania. 10 janvier 2019
Basy mahery vaika iray marika Mas 36 sy basy vita tanana miisa dimy no saron’ny zandary avy ao Amoron’i Mania rehefa nifandona tamin’ ny dahalo mpangalatr’omby ny 10 janoary 2019 tao amin’ny fokontany Namirana Kaominina Talata Vohimena disitrikan’i Manandriana. Misy ny hetsika fampandriantany na amin’ izao fotoana izao ataon’ny mpitandro filaminana any an-toerana, Tao anatin’ izany indrindra no naharay antso vonjy ireo zandary amin’ny fisiana dahalo maromaro nangalatra omby miisa 650 tao an-toerana.
Tsy niandry ela fa niatrika avy ny fanarahan-dia ireo omby ve ry ireo mpitandro filaminana miaraka amin’ny fokonolona. Vao nifankahatratra ny andaniny sy ankilany dia nisy ny fifampitifirana ka nampisy izao tranga fahatesana olona izao izao. Na izany aza anefa dia mbola tafatsoaka ireo andian-dahalo hafa nitondra ny omby. Mbola mitohy araka izany ny fanenjehana eo amin’ireo mpanara-dia ahitana mpitandro filaminana sy ny solontenam-pokonolona. Arahina akaiky ny tohin’ny toe-draharaha.